ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲအပြီး တက္ကစီမောင်း ငွေရှာခဲ့ရတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ပူတင်
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲသွားပြီးနောက်ပိုင်း ငွေကြေးအကျပ်အတည်းကြုံခဲ့စဥ် တက္ကစီမောင်းခဲ့ဖူးကြောင်း လတ်တလော ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတ င်းထောက်တွေနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါတယ်။…
တက္ကစီမောင်းတဲ့အကြောင်း ပြောရတာကို မကြိုက်ဘူးလို့လည်း ပူတင်က ဝန်ခံထားပါတယ်။ ယခင်က မသိထားကြတဲ့ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကို ‘Rec ent History’ အမည်ရှိ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတွက် ရိုက်ကူးမှုအတွင်း သမ္မတပူတင်က မျှဝေခဲ့ပါတယ်။..
အဆိုပါ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ အတွင်း ရုရှားမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ပြန်လည်သုံးသ ပ်ထားပါတယ်။မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲသွားခဲ့ပြီး တုန်လှုပ်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ မျက်မှောက်ခေတ် ရုရှားနိုင်ငံ ပေါ်ထွန်းလာမှုအကြောင်း ပုံဖော်ထားပါတယ်။…
‘Recent History’ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရေးဟာ ၄ နှစ်ကြာခဲ့ပြီး Russian TV မှာ ပထမဆုံး ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ကာ စနေနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်) က ကြော်ငြာပြသခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ပူတင်ဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ထိုစဥ်က ၎င်းရဲ့အကြီးအကဲ Anatoly Sobchak က စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့တော်ဝန် နေရာအတွက် ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် အချိန်ပိုင်း တက္ကစီမောင်းသူအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။…
Sobchak ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ပူတင်ကို မော်စကိုမြို့ရှိ သမ္မတရုံးအဖွဲ့မှာ အလုပ်လုပ်ရန် ကမ်း လှမ်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ပူတင်က ထိုအလုပ်ကို လက်ခံခဲ့ပြီး ၎င်းရဲ့ဇာတိမြို့ စိန့်ပီတာစဘတ်ကနေ ရုရှားမြို့တော် မော်စကိုသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ‘Recent History’ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာ သမ္မတပူတင်က နောက်ထပ် အံ့အားသင့်စရာတစ်ခုကိုလည်း ထုတ်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။…
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း အနည်းဆုံး အမေရိကန် CIA အေးဂျင့်တစ်ဦးဟာ ရုရှားအစိုးရကို အကြံ ပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့တာကို သိခဲ့တယ်လို့ သမ္မတပူတင်က ထုတ်ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး အေးဂျင့်တွေက ရုရှားရဲ့အာဏာ ပိုင်အဖွဲ့အတွင်း စိမ့်ဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းက ထိုအေးဂျင့်တွေကို ရှင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ပူတင်က မှတ် တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပြောခဲ့ကြောင်း RT သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။….
(Anatoly Sobchak နှင့် ပူတင်) (Photo: AP)
႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းႀကဳံခဲ့စဥ္ တကၠစီေမာင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း လတ္တေလာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတ င္းေထာက္ေတြနဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။…
တကၠစီေမာင္းတဲ့အေၾကာင္း ေျပာရတာကို မႀကိဳက္ဘူးလို႔လည္း ပူတင္က ဝန္ခံထားပါတယ္။ ယခင္က မသိထားၾကတဲ့ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာေတြကို ‘Rec ent History’ အမည္ရွိ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္အတြက္ ရိုက္ကူးမႈအတြင္း သမၼတပူတင္က မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။…
အဆိုပါ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ႐ုရွားမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပန္လည္သုံးသ ပ္ထားပါတယ္။မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ၿပီး တုန္လႈပ္စရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာမႈနဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႐ုရွားနိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာမႈအေၾကာင္း ပုံေဖာ္ထားပါတယ္။…
‘Recent History’ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ေရးဟာ ၄ ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီး Russian TV မွာ ပထမဆုံး ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမွာျဖစ္ကာ စေနေန႕ (ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္) က ေၾကာ္ျငာျပသခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ပူတင္ဟာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ထိုစဥ္က ၎ရဲ႕အႀကီးအကဲ Anatoly Sobchak က စိန႔္ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေနရာအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ပိုင္း တကၠစီေမာင္းသူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။…
Sobchak ေ႐ြးေကာက္ပြဲရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပူတင္ကို ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ သမၼတ႐ုံးအဖြဲ႕မွာ အလုပ္လုပ္ရန္ ကမ္း လွမ္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ပူတင္က ထိုအလုပ္ကို လက္ခံခဲ့ၿပီး ၎ရဲ႕ဇာတိၿမိဳ႕ စိန႔္ပီတာစဘတ္ကေန ႐ုရွားၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္စကိုသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ‘Recent History’ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ သမၼတပူတင္က ေနာက္ထပ္ အံ့အားသင့္စရာတစ္ခုကိုလည္း ထုတ္ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။…
၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အနည္းဆုံး အေမရိကန္ CIA ေအးဂ်င့္တစ္ဦးဟာ ႐ုရွားအစိုးရကို အႀကံ ေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တာကို သိခဲ့တယ္လို႔ သမၼတပူတင္က ထုတ္ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရး ေအးဂ်င့္ေတြက ႐ုရွားရဲ႕အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕အတြင္း စိမ့္ဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎က ထိုေအးဂ်င့္ေတြကို ရွင္းထုတ္ခဲ့တယ္လို႔ ပူတင္က မွတ္ တမ္း႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း RT သတင္းက ေဖာ္ျပပါတယ္။….
Previous Article မင်္ဂလာဆောင်ပြီး2ပတ်အကြာမှ ဇနီးသည်က ယောင်္ကျားဖြစ်နေမှန်း သိခဲ့ရတဲ့အမျိုးသား
Next Article မြစ်ထဲမျောပါလာတဲ့ ငွေစက္ကူ ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦး – NEW